BREAKING NEWS: Shirka Hogaamiyaasha Dawlad gobaleedyada oo lagu soo gaba-gabeynayo Kismaayo & Qodobada soo bixi doona? | Www.tusmo.net
BREAKING NEWS: Shirka Hogaamiyaasha Dawlad gobaleedyada oo lagu soo gaba-gabeynayo Kismaayo & Qodobada soo bixi doona?
KISMAAYO(P-TIMES)- Shir ay sadexdii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada Kismaayo ku lahaayeen hogaamiyaasha dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa lafilayaa in maanta barqanimada lasoo gaba-gabeeyo, iyadoo diiradda lagu saaray arrimo xasaasi oo kala duwan.
Wararkii ugu dambeeyey oo ay Puntlandtimes ka heshay wada xaajoodyadii u dambeeyey ayaa xaqiijinaya in ay jiraan qodobo ay isku raaceen dhinacyada dawlad gobaleedyada oo ay ka doodeen, isla markaasna ay soo bandhigayaan maanta.
Maalmihii ay halkan joogeen Hogaamiyaasha dawlad gobaleedyada waxay aad uga hadleen qaabka wada shaqeynta ay la leeyihiin dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, sidda ugu wanaagsan ee xal looga gaari karro qodobada taagan.
Dawlad gobaleedyadu waxay go’aan ka gaareen xiisada siyaasadeed ee kataagan Galmudug, waxay isku raaceen tubta loo marayo, iyadoo si wadajir ah dhinacyada oo dhan loogu yeero, loona dhexdhexaadinayo si meesha looga saaro khilaafka.
Arrimaha kala dhaxeeya dawladda Faderaalka ayaa ahaa kuwa ugu badan ee ay aadka uga doodeen, waxaana aan jirin ilaa hadda go’aamo la og yahay oo ay wadar u gaareen dhinacyadan.
Balse warar hoose ayaa u sheegay Puntlandtimes in arrimaha Khaliijka iyo qadiyadooda lagu kala aragti duwanaaday ayna dhinacyadu doodo gaar ah xalay ka sii lahaayeen, ugu dambeyn-na laga yaabo in aan waxba laga soo qaadin mudada uu socdo shirkan.
5-ta Madaxweyne dawlad gobaleed ee Soomaalida ayaa go’aansaday dhismaha madal ay ku mideysan yihiin,, taas oo ay iskugu imaanayaan dhinacyadu kuna kala war-qaadanayaan, waxayna u dhisteen si ay u yeeshaan wada hadalo iyo Is wareysi joogta ah.